Jubbaland oo soo bandhigtay rag ka soo goostay Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Jubbaland oo soo bandhigtay rag ka soo goostay Shabaab
Jubbaland oo soo bandhigtay rag ka soo goostay Shabaab
Taliska Ciidanka Nabad Sugidda maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubbaland waxa ay ku soo bandhigeen 12 nin oo ay sheegeen in ay ka soo goosteen xoogaga Shabaab.
Taliyaha Nabad sugidda Maamulka Jubbaland Khaalid Sheekh C/laahi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay raggan oo 12 gaaraya inay iska soo dhiibeen dhanka deegaanka Baar-sanguuni iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Deegaanka Baar-sanguuni ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeyay Ciidanka Jubbaland oo garab ka helaya kuwa Mareykanka iyo ururka Al-shabaab, waxaana dagaaladaasi ka dhashay khasaare kala duwan.
Qaar ka tirsan Shabaabka isa soo dhiibay oo laftirkooda warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen isa soo dhiibitaankooda inay ka dambeysay kadib markii sida ay tilmaameen la kulmeen culeysaad iyo daruufo adag.
Ugu dambeyntii Maamulka Jubbaland ayaa wuxuu sheegay raggan isa soo dhiibay inay gacmo furan ku soo dhaweynayaan, ayna suuragelin doonaan marka ay dhameystaan tababarka dhaqancelinta inay dadkooda ka mid noqdaan, mustaqbalkoodana dhistaan.